Fiaraha-miasa Frantsa sy Madagasikara : 880.000 euros ny fanadihadiana ho an’ny tetikasa 2017-2018 | NewsMada
Mialoha ny hanatanterahana ny asa samihafa, tsy maintsy atao ny fanadihadiana lalim-paka. Misandrahaka amin’ny sehatra maro ny tohana ataon’ny Fiaraha-miasa frantsay (AFD), an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra.
Natao sonia, omaly tao amin’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola, ny fanampiana avy amin’ny AFD (Agence française de développement), 880.000 euros (2.720.000.000 miliara Ar). Niara-nanao sonia izany ny ambasadaoro frantsay, Véronique Vouland-Aneini, sy ny minisitra Rakotoarimanana Gervais. Fanampiana hoentin’ny Frantsay amin’ny alalan’ny AFD, hanaovana fanadihadiana mialoha ireo sehatra nosokajina ho laharam-pahamehana : fambolena, fanajariana ny tanàn-dehibe, fampianarana ary fanofanana momba ny asa. Hisy tetikasa homanin’ny Afd amin’ireo, hotanterahina amin’ny taona 2017- 2018.
Momba ny tanàn-dehibe, ohatra, hojerena ny fanamboarana ireo lalankely eto Antananarivo, miainga avy amin’izany fanadihadiana izany koa ny hamaritana tetikasa hatao any amin’ny faritra Diana. Notsiahivin’ny minisitra Rakotoarimanana Gervais fa miankina betsaka amin’ny any ambanivohitra ny fampandrosoana. Ny any ambanivohitra itoeran’ny 70 %-n’ny mponina, araka ny antontanisa azo ny taona 2015.
Tohodrano, lalana, herinaratra,…
Maro anisa mivelona amin’ny fambolena sy ny fiompiana, mila tohana karazany maro, indrindra fa ireo fotodrafitrasa miantoka ny asan’izy ireo, toy ny tohodrano, lalana, herinaratra. Efa nametrahana tahiry ho an’ny fambolena ny faritra Vakinankaratra, hita nampiakatra ny fari-piainan’ny tantsaha maro. Koa miandry izay tetikasa haroso any aminy koa ireo faritra maro hafa, samy ahitana ny mampiavaka azy.
Fanaovan-tsonia fanintelony izao ifanaovan’i Frantsa sy Madagasikara izao nanomboka tamin’ity taona ity. Voakasika amin’izany ny any ambanivohitra, fizahantany ary izao hanaovana fanadihadiana ho an’ny tetikasa 2017-2018 izao. Nanomboka ny taona 2015, 50 tapitrisa euros ny famatsiam-bola avy amin’ny AFD ho an’ny asa fampandrosoana eto Madagasikara.